घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू नेट फिलिप्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो नेट फिलिप्स बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थका बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षिप्तमा, हामी पेशेवर फुटबलर को जीवन इतिहास चित्रण गर्छ जुन उत्तर पश्चिम इ England्ल्यान्डका हुन्। हामी यो कथा उसको शुरुको दिनदेखि नै शुरू गर्छौं, जब ऊ लिभरपुलसँग खेलको साथ प्रख्यात भए।
नाट फिलिप्स बायोको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा स्वाद लिनको लागि, वयस्क ग्यालरीमा उनको बाल्यकाल हेर्नुहोस्। कुनै प्रश्न बिना, यसले उसको अद्भुत फुटबल कथा भन्छ।
नथनेल फिलिप्सको जीवनी। उनको प्रारम्भिक जीवन र सफलता कहानी हेर्नुहोस्।
हामी सबैलाई थाहा छ उहाँ एक राम्रो फुटबलर हो जसले प्रिमियर लिग क्लब लिभरपूलको लागि सेन्टर-ब्याकको रूपमा खेल्छ। यद्यपि धेरैलाई उनको जीवन कथा थाहा हुँदैन। हामीले यसलाई तयार गरेका छौं, र थप कुनै विज्ञापन बिना नै सुरु गरौं।
नाट फिलिप्स बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसको वास्तविक नाम नथनिएल हो र नाट मात्र उपनाम हो। नथिएनेल ह्यारी फिलिप्सको जन्म मार्च १ 21 of of को २१ औं दिनमा उनको आमा, अन्ना फिलिप्स र बुबा, जेम्स नील फिलिप्स इ Bol्गल्याण्डको बोल्टनमा भएको थियो।
अ foot्ग्रेजी फुटबलर दोस्रो छोराको रूपमा संसारमा आएका थिए, चार छोरा मध्ये (Thea, Billy, Nat र Saskia) उसका आमा बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका हुन् जसलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ।
नाट बोल्टन वान्डरर्सलाई समर्थन गर्दै हुर्केका छन् जुन उनी आउँछन्। उनी आफ्नो बुवासँग पारिवारिक बगैंचामा फुटबल खेल्न रमाईलो गर्थे र खेल हेर्ने उनको पहिलो अनुभव रिबुक स्टेडियममा (उमेर)) थियो। सानो छँदा, नाटले तीन व्यक्तिको मूर्ति बनायो, उनको बुवा, जे जे ओकोचा र रोनाल्डिन्हो। यहाँ भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
इ England्ल्यान्ड डिफेन्डरले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू एक जेठी बहिनी थिआ फिलिप्स, जेठी दाजु बिली फिलिप्स र कान्छी बहिनी सस्किआ रोजसँग बिताए। नाटले आफ्नो निकटको आफन्तसँग ठूलो बाल्यावस्थाको भाईको सम्बन्धको आनन्द उठाए।
त्यतिखेर बिल्ली जस्ता दाइजस्तो भाई भएको अर्को राम्रो साथी थिएन। त्यसकारण, उसको सुन्दर बहिनीहरू भन्दा राम्रो मित्रहरू छैनन् - थेआ र सस्किआ रोज उसको छेउमा।
नेट फिलिप्स परिवार पृष्ठभूमि:
केन्द्र फिर्ता फुटबल संग एक समृद्ध इतिहास छ जो एक खेल परिवार को हो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… नेट पूर्व बोल्टन फुटबलर र डिफेन्डर, जिम्मी फिलिप्सको छोरो हो।
बोल्टन मूल निवासी फुटबल पैसाबाट सञ्चालित घरबाट आएको छ - धनी बुबाबाट। ऊ पनि परिवारबाट आएको छ जससँग एक उत्तम होममेकिंग आमा छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, धनीलाई नाममा चिन्ताको लागि त्यहाँ कुनै र्याग छैन। तसर्थ, फुटबलर माथिको मध्यम वर्गको पृष्ठभूमिबाट छ।
हामीसँग यहाँ छन् नथनेल फिलिप्सको बुबाको फोटो - जेम्स नील फिलिप्स - उसको राम्रो दिनहरूमा। नाटलाई आफ्नो बुबाको मायालु हातमा चित्रण गरिएको छ। हामी उहाँकी जेठी बहिनी थेआ फिलिप्स पनि ड्याडीको अगाडि देख्दछौं जबकि बिली फिलिप्स उनीहरूको अलावा मस्कटको रूपमा पनि थिए। यहाँ एक भिडियो छ जुन बोल्टन फुटबल ड्याडमा नथनिएलले पाएका सुविधाहरूको बारेमा कुरा गर्दछ।
नेट फिलिप्स परिवार मूल:
डिफेन्डर बोल्टन, ग्रेटर म्यानचेस्टर, उत्तर पश्चिम इ England्ग्ल्यान्डको एक ठूलो शहरबाट आउँदछ। यो शहर ऐतिहासिक र परम्परागत रूपमा लन्काशायरको एक हिस्सा हो र यो म्यानचेस्टर शहरबाट केवल 31१ मिनेट टाढा छ। बोल्टन इ England्ल्यान्डमा कपडा उत्पादनको घर हो।
यो नक्शाले Nat फिलिप्स उत्पत्ति वर्णन गर्दछ।
नथनिएल फिलिप्स ह्वाइट British ब्रिटिश जातिमा पर्छ जुन ग्रेटर म्यानचेस्टरको डेमोग्राफीको 79%% मान्छे बनाउँछ।
नाट फिलिप्स शिक्षा:
ठ्याक्कै जुलाई २०१6को 2013th तारिखमा, नेटको यस पोष्ट माध्यमिक विद्यालयमा ससिया रोज, उनको सानी बहिनीको साथ गोली लागेको थियो। उनले प्रशंसकहरूलाई भने कि यो उनका प्रि प्रम चित्र हुन्। निहित द्वारा, उहाँ प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा प्रणाली मार्फत जानुभयो - सम्भवतः बोल्टनमा।
नाट फिलिप्स उनको सानो बहिनी, Saskia रोज फिलिप्स संग प्रि-प्रोम फोटो। यो देखाउँछ कि ऊ स्कूल गए।
नाट फिलिप्स फुटबल कहानी:
उसले बाल्यावस्थादेखि नै आफ्नो बुबाको पाइलामा टेक्न योजना बनायो। २००० मा फुटबलबाट अवकाश लिने काममा उहाँका बुबा जिमी फिलिप्सलाई गाह्रो थियो। उनको बुट झुन्ड्याउँदा नाटका बुबाले आफ्नो बच्चाको परिवारको सपनालाई निरन्तरता दिन सक्दो प्रयास गरे।
त्यो वर्ष २०००, र नाटको क्यारियरको तयारीको लागि, जिम्मी फिलिप्स बोल्टन वान्डरर्स युवा कोचिंग स्टाफमा सामेल भएता पनि टोलीका लागि एक खेलाडी थिए। उसको गाइडलाई धन्यवाद, नाट कोमल उमेरमा खेलको प्रेममा डुबे। युवा बुबा को बुबाको रूपमा उहाँसँग बोल्टोन वान्डरर्स एकेडेमीमा परीक्षण पास गर्नु सजिलो थियो।
नेट फिलिप्स बोल्टनको साथ प्रारम्भिक जीवन।
सानो नाट बक्स-टु-बक्स सेन्ट्रेब्याकको रूपमा शुरू भयो र उनको टोलीको सबैभन्दा सानो बीच थियो। उसको सानो कदका कारण उसलाई बिभिन्न स्थानमा खेल्न अनुमति दिइयो। ऊ केवल उ केन्द्रको रूपमा पछि बढ्यो किनकि ऊ लामो भयो - पछि वर्षहरूमा। यहाँ बोल्टनमा आफ्नो शुरुआती बर्षको दौडान उसको खेलको स्थितिहरूको बारेमा भिडियो छ।
युवा बाल्यकाल देखि एक विजेता भएको छ। तपाईं पहिलो ट्राफी बिभिन्न टीमले जित्नु भएको थियो जुन उनले खेल्नु भएको थियो। एउटा जुन अरू कसैले प्रशिक्षित गर्यो - उसको बुवाले होइन। लाइफबगरसँग नाटको पहिलो फुटबल ट्रफीको बारेमा एक अनन्य भिडियो कहानी छ जुन उनले बच्चाको रूपमा जितेका थिए।
उसको बुवाको शिकारमा नाट क्लबको एकेडेमी स्तरमा छिटो प्रगति गर्नुभयो। जिम्मी फिलिप्स बोल्टन युवा क्षेत्रका साथ आफ्नो छोराको अवधिमा बोल्टन एकेडेमी कोचको रूपमा रहे। लाड प्यार गर्नुहोस्, उसले कडा धक्का दियो। यो उनले २०१ successfully मा सफलतापूर्वक युवा फुटबलबाट स्नातक भएको देखे।
उसको बुबाको हेरचाहमा, हाम्रो केटा एक सुपरस्टार बन्न।
प्रारम्भिक जीवन सीनियर फुटबलको साथ - संयुक्त राज्य अमेरिका खोल्छ:
यो युवा स्नातक हुनु अघि फिलिप्सले दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सिके। कि उनीसँग बोल्टनको एकेडेमीका सँगी स्नातकहरूलाई पेशागत ठेक्का दिइने छैन। कारण यो थियो कि क्लब, त्यसबेला, आर्थिक रूपमा अशक्त भएको थियो।
युवावस्थामा बुबाको पखेटामा रहेपछि नथनिएल फिलिप्सका आमाबाबुले आफ्ना छोरालाई घरबाट धेरै टाढा आफ्नो भाग्यको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। यो वास्तवमै इ England्ल्यान्ड - संयुक्त राज्यबाट टाढा छ।
नाटलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा खेल्ने छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरिएको थियो, ठीक उत्तरी क्यारोलिना युनिभर्सिटी अफ मेनस फुटबल टीममा। सत्य यो हो कि उसले सफलतापूर्वक उडान बुक गर्‍यो र संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्राको लागि थियो, यो हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई थाहा छैन।
बोल्टन वान्डरर्सले युवा फुटबलरहरूलाई एउटा ठेक्का दिन असफल भएपछि धेरै स्काउट्सले उनीहरूका अधिकांश खेलाडीहरू चोरी गरेर हस्तक्षेप गर्‍यो। नथनेलले संयुक्त राज्य अमेरिका जाने योजना बनाइरहेको बेला एन्डी ओब्रायन नाम गरेको एक स्काउटले उनको नाम लिभरपूलमा लिएको थियो।
इ England्ल्यान्ड स्काउटको उत्तरी लिभरपूलले उसको क्लबले एक सम्भावित समीक्षा गरेको थियो जसले चाँडै नै नथनेल फिलिप्सको परिवारलाई एउटा चिठी लेखेर भन्यो कि उनका छोराले भनेको कुराको लागि आउनु पर्छ।तुरुन्तै व्यवस्थित परीक्षण" र सम्भवत: एक वरिष्ठ सम्झौता। भाग्यको रूपमा यो हुने थियो, नाटले परीक्षणहरू पार गरे तर उनको संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा अझै सक्रिय थियो।
प्रारम्भिक लिभरपूल वर्षहरू:
के तपाईंलाई थाहा छ?… जुन दिन नथिएनेल फिलिप्सले पेन-टु-पेपर राखेका थिए, लिभरपूलसँग उसको पहिलो वरिष्ठ अनुबन्ध, उनी एक्कासी शार्लोट (संयुक्त राज्य अमेरिका) सम्म यात्रा गर्ने थिए। त्यो दिन, उनले नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालय फुटबल संस्था निराश गरे जसले उनलाई चार बर्षको फुटबल छात्रवृत्तिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि कुर्दै थिए। लिभरपूल ECHO सँग कुरा गर्दा, Nat एक पटक भने;
“मैले लिभरपूलको लागि हस्ताक्षर गरेको थिएँ जुन दिनमा म फ्लाई आउट भएको थिए। म दुबै पक्षले मलाई निराश पार्न चाहेनन्, म वास्तवमै अलमल्लमा परेको थियो।
यो पागल दिन हो तर म LIVERPOOL अनुभव गर्ने राम्रो तरिका कल्पना गर्न सक्दिन। मैले तिनीहरूलाई छनौट गरें र अर्कोलाई अपग्रेड गरें। ”
नाट फिलिप्स जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
बोल्टनबाट इ England्ल्यान्डको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी क्लब मध्ये एकमा आफ्नो नाम बनाउनको लागि आउन सजिलो छैन। उनको परवरिशलाई हेर्दा, बोल्टन मूल निवासीले आफूलाई सुसज्जित पारे - लिभरपूलको यू २ U स्तरमा आफूलाई स्थापित गर्ने लडाईको सामना गर्न तयार छन्। Althougt यो केहि समय लाग्यो, फिलिपले आफ्नो मैदान फेला पारे र आफ्नो नयाँ परिवेश र फुटबलको एक उच्च स्तरमा समायोजित गरे।
रिजर्भ टोली खेलहरूको तीन सत्रहरूले फिलिप्सले आफ्नो मार्गमा भएका सबै अड्डाहरूलाई भंग गरे। उनले आधुनिक दिन केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो आशा फिर्ता पाए ... शारीरिक रूपमा बलियो, आक्रामक र हेडिilities क्षमताहरू। एक दृढ नाट उनको टीमको कप्तान बन्न उक्ले र पहिलो टीम फुटबल को लागी तयार थियो।
हार्ड पहिलो टीम र सक्रिय विकल्प:
२०१ 2018 को गर्मीमा, फिलिप्सलाई जुर्गेन क्लोपद्वारा लिभरपूलको पहिलो टीम टोलीसँग प्रशिक्षणको लागि आमन्त्रित गरियो। प्रशिक्षणमा उनी बाहिर निस्केका बहादुरीका लागि धन्यवाद, उनी क्लबको रिजर्भ टोलीको बोनफाइड सदस्य भए जसले पछि नयाँ सदस्यहरू पाए। कर्टिस जोन्स.
यद्यपि ठूलो प्रतिस्पर्धाको कारण, नाटको लागि ठूलो केन्द्र ब्याकको जस्तो आउटस्क्लास गर्न गाह्रो भयो - जोएल माटिप र क्रोएसियाको Dejan Lovren। नेट फिलिप्स तपाईंले २०१ U यूईएफए च्याम्पियन्स लिग फाइनल BUT मा जीतको उत्सव मनाउनुभयो तर यो जित्ने टीमको हिस्सा थिएन।
VfB स्टटगार्ट कहानी:
२०१ In मा, नेट - नियमित फुटबलको लागि बोली - जर्मनीको दोस्रो तहमा aण सारियो। उनीसँग VfB स्टुटगार्टको साथ एक सफल मौसम थियो - उनीहरूको पहिलो-टीम फुटबलमा धेरै जोखिमको साथ।
नाट फिलिप्सको ड्राईभ र दृढ संकल्प - जसले उनको टीमलाई यति धेरै सफा पानाहरू राख्न मद्दत गर्‍यो - उसको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति भयो।
बढ्दो इ England्ल्यान्ड डिफेन्डर VfB स्टटगार्टको साथ जनावर भयो।
बोल्टन मूल निवासीले अनुभवी स्टुटगार्टका खेलाडीहरूबाट धेरै कुरा सिकेका थिए - होल्जर Badstuber को मनपर्दो मारियो गोमेज। तलको भिडियोले नाटि कत्ति विनम्र छ - उसले मारियो गोमेजसँग गरेको कुराकानीको बारेमा बोलेको छ।
उत्तम लिभरपूल रिकलको लागि आफ्नो अवसरको प्रतिक्षा गर्दा धैर्य बन्नुभयो। २ December डिसेम्बर २०१ 27 मा, रेडले उनलाई क्लबमा १२ दिन पछि फिर्ता पठाउन मात्र loanणमा फिर्ता गरे। उनले उसलाई रोक्न सकेन किनकि उनले विश्वास गरे कि उहाँ आफैं फेरि आउनुहुनेछ।
नाट फिलिप्स बायो - सफलता कहानी:
२०२०/२०११ को मौसममा पुग्न, जर्गन क्लप्प एक दुःस्वप्न भन्दा बढी के थियो के साथ शुरू गर्नुभयो। एक बचाव चोटपटकको स्कटले उनको लिभरपुललाई पहिलो टीमको नामसँग जोड्यो - मनपर्‍यो Virgil van Dijk र Joe Gomez सबै बाहिर।
उनका सहकर्मीहरूलाई चोटपटक लाग्यो, नेट फिलिप रक्षाको लागि लिभरपूलको आशाको किरण बने।
जुर्गन क्लोप आफ्नो सुरक्षाको लागि आशाको किरण प्रदान गर्न सक्ने कुनै पनि चीजको खोजीमा थिए। उसका स्रोतहरूमा गहिरो खोजी गर्दै, कम लोकप्रिय नाम - फिलिप्स आउट भयो। छिटो, उनले एक दोस्रो VfB स्टटगार्ट loanण पुन: रिकल शुरू गरे। जर्मन कोचले योनाको छेउमा सबै आशा राखे रे विलियम्स र मिडफील्ड रूपान्तरण -Fabinho.
October१ अक्टूबर २०२० मा, फिलिप्सले प्रिमियर लिगमा डेब्यू गरे, जसको टीमले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई २-१ ले जित्यो। Foot फुट फिट 31 इन्च alonside नयाँ साइन इन - ओजान कबक ब्याकलाइनमा ट्रेडमार्क फ्लुनेस -को प्रतिस्पर्धा गर्‍यो जसले गर्दा उनीहरूको बचाउको फाल अवधिको अन्त्य भयो।
नेटमा पूर्ण केन्द्रको विशेषता पछाडि छ।
नाइटले लिभरपुल फ्यानहरूलाई प्रदर्शन गरे कि ऊ हावामा कत्ति राक्षसी छ। श्रृंखला मास्टरक्लास ट्याकल र डिफेन्सिभ जागरूकता संग, उनले सबैलाई यो प्रोभास्ड गरे कि उनी कहिल्यै आफ्नो नयाँ भूमिकामा डुब्न सक्दैनन्।
लिभरपूलको अर्को ठूलो कुरा:
जब म नथनेल फिलिप्सको जीवनी लेख्छु, विश्वले उनलाई अहिले लिभरपुल डिफेन्स पहिलो टीम छनौटको लागि उचित चुनौतीको रूपमा देख्छ। यहाँ सम्म कि Jurgen Klopp आफ्नो विश्वसनीय खुट्टा solider सक्षम थियो कसरी मा खुशी छ गहिरो प्रीमियर लिगमा फ्याँकिए पछि पौडिनुहोस्.
हेर्नुहोस् जो भर्खर Jurgen Klopp को सब भन्दा राम्रो साथी बने। तिनीहरू दुबै राम्रो देखिन्छन् हैन त?
उसको मास्टर जस्तै ठूलो, चतुर, स्मार्ट, बुद्धिमान र सबै, ... नेट लिभरपूल पोष्ट-कोविड युगको सफलताका कथाहरू मध्ये एक प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन Klopp ले उसलाई "हावामा माउन्स्टर“। यहाँ भिडियो प्रमाण छ।
इच्छुक सूईटरहरू भीख माग्दै आफ्नो हस्ताक्षरको लागि नगद माग्दै, नाटको परिवारको लागि ठूलो खुशी हुनेछ, यदि उसले बेलायत बोलाउँदछ भने। ठीक छ, मात्र समय बताउँछ। बाँकी हामी यो बायो मा भन्छौं, ईतिहास हो।
नाट फिलिप्स प्रेम जीवन:
प्रत्येक फुटबलर जसले सफलतापूर्वक एनफील्डमा आफ्नो बक्यौता भुक्तान गर्यो, एक ग्लैमरस WAG का हकदार छ। नाटका लागि, त्यहाँ एक प्रेमिका छ जो यो देखिन्छ जो देखिन्छ, आफ्नो मुटु चोरी। उनको बच्चाको अनुहार देखिन्छ र व्यक्तित्व (नेट लागि मात्र उत्तम!) कारणहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ, किन उनी विश्वास गर्छन् कि उनी आफ्नी श्रीमती बन्न बदल्छन्।
हेर, नेट फिलिप्स गर्लफ्रेंड। उनीसँग प्राकृतिक सौन्दर्य छ र उसको हृदय पग्लनको लागि केवल सही WAG छ।
भविष्यका इ England्ग्ल्यान्ड डिफेन्डरले इन्स्टाग्राम मार्फत आफ्नो प्रेम जीवनको सिजलिंग फोटोहरू साझेदारीमा रमाउँदछन्। हामीसँग एउटा तस्बिर छ जहाँ नाट फिलिप्स पूर्ण रूपमा सहज देखिन्छ आफ्नो छुट्टै प्रेमिकाको साथ छुट्टिको मजा लिंदै। यस्तो देखिन्छ कि ती दुबै विश्वको सबैभन्दा ठूला वास्तुकला स्थलहरूको भ्रमण गर्न रमाईलो गरिरहेका छन्।
नेटको साथ कहिल्यै एक सुस्त क्षण छैन। ऊ आफ्नी प्रेमिकालाई धरतीको सबैभन्दा सुन्दर स्थलहरूमा लैजान्छ।
नेट फिलिप्स व्यक्तिगत जीवन:
यहाँ, हामी तपाईंलाई प्रश्नको उत्तर दिन मद्दत गर्दछौं - फुटबल बाहिर नाट फिलिप्स को हो? सेन्ट्र्याबको व्यक्तित्व चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
नाट फिलिप्स व्यक्तिगत जीवन-एक्स्पलेन्ड !!
सर्वप्रथम पहिलो, अ foot्ग्रेजी फुटबलर त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले जीवनका साना चीजहरू बुझ्दछन्। नाटसँग उनीहरूको विचारलाई ठोस कार्यहरूमा रूपान्तरण गर्ने शक्ति छ र उसले आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अतिरिक्त मानिस भित्र जाने इच्छाशक्ति सँधै देखाउँदछ।
नाट फिलिप्स Lifestye:
फुटबलर जीवन शैली विदेशी कार, घर (हवेली) र Swagger प्रदर्शन गरेर परिभाषित छैन। Lifebogger यो अनन्य भिडियो प्रस्तुत गर्दछ जुन नाट फिलिपको पहिलो कारको पछाडि एक दुख्खा कथा प्रकट गर्दछ।
उहाँ आफ्नो प्रेमिका संग, नाट आफ्नो फुटबल पैसा प्रयोग गर्दछ लगातार दुनिया संग सम्पर्कमा रहन, सकेसम्म प्रकृति अनुभव। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, हामी जान्दछौं उसले आफ्नो ज्याला छुट्टीको यात्रामा खर्च गर्दछन्।
डिफेन्डरले आफ्ना पैसाहरू सही काममा खर्च गर्दछ - VACATION !!
नेट फिलिप्स पारिवारिक जीवन:
Foot फुट Def डिफेन्डर एक परिवारबाट आउँदछ जहाँ एक अर्कोको बीचमा नियमित अन्तरक्रिया हुन्छ। तलको फोटोमा अवलोकन गरिए अनुसार, राम्रो पारिवारिक जीवन छ। उसको ब्रुडको प्रत्येक सदस्य एक अर्काको कम्पनीमा रमाउँछन् र सँगै काम गर्न धेरै समय खर्च गर्दछन्।
के एक संयुक्त परिवार Nat फिलिप्स आउँछ।
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई नेट फिलिप्स अभिभावकहरू र उसको परिवारका बाँकी सदस्यहरूको बारेमा अझ बढी बताउनेछौं; भाई र बहिनीहरू।
नाट फिलिप्स बुबाको बारेमा:
जेम्स नील फिलिप्सको जन्म फेब्रुअरी १ ​​8 .1966, आठौं दिन उनको आफ्नै गृहनगर बोल्टनमा भएको थियो। नाट फिलिप्सका बुबा पूर्व फुटबलर थिए जसले बोल्टन, रेंजर्स र मिडल्सब्रुको लागि खेले। वर्ष २००१ मा, उसले ton 2001२ क्यारियर खेल र १ goals गोलको पछि बोल्टनसँग अवकाश लिए। तल नाट फिलिप्स ड्याडको ग्यालरी छ जुन उसको खेल दिनहरू डर्इng छ।
हेर्नुहोस् नाट फिलिप्स बुबा उसको राम्रा दिनहरूमा।
सेवानिवृत्ति पछि, नथनेल फिलिप्सका बुबा बोल्टन वान्डरर्स रिजर्भ म्यानेजरको रूपमा कार्यरत थिए। पछि उनी क्लबको एकेडेमी निर्देशकमा उत्रिए जहाँ उनले युवा टीम कोचको रूपमा धेरै वर्ष बिताए। उनका बच्चाहरूमा उनले नाटलाई उनको पाइला पछ्याए।
बिस्तारै उनी सानो नाटलाई फुटबलरमा परिणत गर्दै थिए। दुबै बुबा र छोरा नजिकै छन्।
नाट फिलिप्स आमाको बारेमा:
हामी यहाँ अन्ना फिलिप्सलाई इबिजाको प्रतिष्ठित निक्की बीचमा उनको फुटबल खेल छोरासँग केही अनमोल समयको आनन्द लिईरहेको देख्छौं। उनी नथानेल फिलिप्सकी आमा हुन्, जो इ woman्ल्याण्डको बोल्टन शहरको एक उत्तम गृहकर्मीका रूपमा परिचित छिन्।
Nate फिलिप्स उनको आमाको साथ - अन्ना - Ibiza को निक्की बीचमा।
नाट फिलिप्स भाई बहिनीहरू:
लिभरपूल फुटबलरको एक भाइ (बिली) र दुई बहिनीहरू थिएआ र सस्किया रोज फिलिपहरू हुन्। तिनीहरू सबै बोल्टनमा हुर्किए र उनीहरूको बचपनको उमेरदेखि नै एक अर्कोको नजिक रहे।
बिली फिलिप्स को बारेमा:
उनको इन्स्टाग्राम प्रोफाइलका अनुसार नाट फिलिप्सको जेठो भाई ई। र जे। गेलो वाइनरी। यस कम्पनीको क्यालिफोर्निया वाइनको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो पारिवारिक स्वामित्व वाइनरीको रूपमा रेकर्ड छ।
यहाँ आईजी मा बिली फिलिप्स प्रोफाइल छ। यसले ई र जे गालो वाइनरीका लागि काम गरिरहेको देखाउँछ।
बिली नट विपरीत कहिल्यै फुटबलर बन्ने बाटोमा लागेन। तपाईं उसको बुबासँग (जिमी) सँगै आफ्नो साना भाईको क्यारियर प्रबन्ध गर्न भूमिका खेल्नुहुन्छ। बिली यहाँ नाटको साथ एक पुस्तक प्रक्षेपणमा भाग लिइरहेको देखिन्छ।
एक पुस्तक प्रक्षेपण मा आफ्नो भाइ बिली संग नाट फिलिप्स।
नाट फिलिप्स बहिनीहरूको बारेमा:
तपाईं यी दुई केटीहरूलाई देख्नुहुन्छ, ... तिनीहरू सबै ठूला भएछन्। बाँयामा एक सस्किआ फिलिप्स हो। उनी नथनेल फिलिप्स कान्छी बहिनी र परिवारको अन्तिम जन्म हो। Thea फिलिप्स दायाँ पट्टि स्थित छ। उनी जेठी बहिनी र परिवारको दोस्रो बच्चा हुन्।
Thea र Saskia सबै बढेको अप हो। हेर्नुहोस् कति राम्री नेट फिलिप्स बहिनीहरू बनिन्।
फुटबलर आफ्ना दिदीबहिनीहरूसँग धेरै नजिक रहन्छ किनकि ऊ उनीहरूलाई अक्सर लिएर जान्छ, परिवारका सदस्यहरूसँग छुट्टीको व्यवहारका लागि बाहिर जान्छ।
नाट फिलिप्स तथ्यहरू:
हाम्रो मेमोरियलको यस अन्तिम खण्डमा, Lifebogger ले तपाइँलाई केन्द्र फिर्ता को बारे मा अधिक सत्य बताउँछ जो भविष्यको इ England्ग्ल्यान्ड स्टार हो।
तथ्य # १ - उहाँ भेषमा लिभरपूल गोलकीपर हुनुहुन्छ:
फुटबल धेरै ट्विस्ट्स र टर्नको साथ एक सबसे अप्रत्याशित खेल हो। तपाईलाई कहिले थाहा हुने छैन अब के हुन्छ। यस कारणले गर्दा नाटले कदम चाले रियो फर्डिनान्ड, जोन ओ'सिया, डानी एल्व्स र जॉन टेरी गोलकीपरको रूपमा प्रशिक्षणमा।
के उसले गोलकिप गर्ने काम गर्न सक्दछ?
नाटले गोलकीपिंगको सीखाहरू सिक्छ त्यसैले उसले गोल पोस्ट सुरक्षित गर्न सक्दछ जब ऊ क्लारियन कल हुन्छ। तपाईले यो सायद विरलै गर्नुहुन्छ, हामीले उसको टोलीको गोलकीपरलाई बाहिर पठाएको र मैदानबाट कसैले गोलकिपिंग कार्य गर्नु पर्ने घटनाहरू देख्यौं। के तपाईं त्यो खराब रूपमा प्रदर्शन हुनेछ लाग्छ हैरी केन कहिले बोलाइन्छ?
यी व्यक्तिहरूले सबैले कलरियन कल प्राप्त गरेका छन्।
LIVERPOOL SALARY BREAK डाउन (£)
प्रति वर्ष: £ 3,696,000
प्रति महिना: £ 308,000
प्रति हप्ता: £ 70,000
प्रति दिन: £ 10,000
प्रति घण्टा: £ 417
प्रति मिनेट: £ 7
प्रति सेकेन्ड: £ 0.11
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो नाट फिलिप्स बायो, लिभरपूलबाट उनले कमाएको कुरा यही हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… लिभरपूलमा औसत व्यक्ति जसले प्रति वर्ष, 84,800०० जीबीपी कमाउँछ उसले लिभरपूलसँग नाट फिलिप्सको वार्षिक तलब बनाउन years 43 बर्ष काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १ - नेट फिलिप्स नेट वर्थ:
२०१२ देखि उनको वरिष्ठ क्यारियरको शुरूआतले दुई वर्षको अनुभव दर्साउँछ - २०२१ तथ्या .्क। Current 2019 2021 ,3,696,000,००० को वार्षिक उनको तलब संग, हामी नेट फिलिप्स को कुल सम्पत्ति करिब £ २ लाख को अनुमान गर्छौं।
तथ्य # १ - एक कुकुर प्रेमी:
हामी मध्ये धेरै जसो फुटबलरहरू, उनीहरूको पाल्तु पशुलाई मन पराउँछन् र नाट फिलिप्स एक अपवाद होइन। ऊसँग फ्लो फिलिप्स नामक कुकुर छ जसलाई उसले आफ्नो प्यारो हृदयमा राख्छ। यहाँ नाट र उसको कुकुरको भिडियो छ - जसलाई उसले आफ्नो बच्चा लिन्छ।
तथ्य # १ - नेट फिलिप्स प्रोफाइल (फिफा):
बिना प्रश्न, उहाँ आफ्नो समग्र र सम्भावित stas मा बृद्धि हुनु पर्छ। नेटले एन्फील्डमा आफ्नै लागि भूमिका खेल्दै छ र कुनै चरमको नजिक छैन। उहाँ जस्तो राम्रो छ बेन Godfrey र त्यसकारण 84 80 को सम्भावित (वा माथि) र overall० को समग्र मूल्या rating्कन योग्य छ।
नाट फिलिप्सको जीवनी, रातो कम ज्ञात डिफेन्डरले हामीलाई सिकाउँछ कि धैर्यता कुर्ने क्षमता छैन, तर हामी कसरी पर्खने क्रममा राम्रो दृष्टिकोण राख्छौं। आफ्नो लिभरपुल अवसर fot प्रतीक्षा गर्दा, Nat समय आउँछ जब ऊ तयार छ सुनिश्चित गर्न सबै थोक गरे।
फिलिप्स कुनै पनि हालतमा २ster बर्षको उमेरमा (२०२१ चेक) जवान हुँदैन। उनको जीवन कहानी मा एक नजर देखिन्छ कि उहाँ रेड्स केन्द्र पछाडिको स्थिति मा एक योग्य हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, उनले अनफिल्डमा आ सपनाको अनुसरण गर्ने नाममा युएस कलेजका फुटबलर हुन छोडे।
यो लाइफबगरले नेट फिलिप्सका अभिभावकहरू विशेष गरी उनका बुवालाई सुनको थालमा बोल्टन क्यारियर फाउण्डेशन दिएर टिप्पणी गर्न बुहोज गर्दछ। पुरानो फेसन सेन्टरले अब लिभरपूलमा उसको क्यारियर विकास गर्ने मौकाको स्वाद लिइरहेको छ। हामी उनको इ England्ल्याण्ड कलको लागि ईमान्दारताका साथ आशा गर्दछौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो टीम छनोटको भागको रूपमा भर्जिल भ्यान डिजकसँग साझेदारी गर्न।
Lifebogger मा, हामी हाम्रो Bio को सहीताको बारेमा ख्याल राख्छौं अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू। कृपया यदि हामी केहि फिल्टिप्सको कथामा सही नदेखिने कुरा देख्नुभयो भने कृपया हामी समक्ष पुग्नुहोस्। उसको मेमोइरको द्रुत सारांशको लागि, तल हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: नाथनीएल ह्यारी फिलिप्स
जन्म मिति: मार्च, १ 21 1997 of को २१ औं दिन।
जन्मस्थान: बोल्टन, ग्रेटर म्यानचेस्टर।
अभिभावक: जेम्स नील फिलिप्स (पिता) र अन्ना फिलिप्स (आमा)
बुबाको पेशा: पूर्व फुटबलर, कोच र छोराको प्रबन्धक।
Siblings: बिली फिलिप्स (एल्डर भाई), थेआ फिलिप्स (पुरानो बहिनी) र सस्किआ रोज फिलिप्स (यंगसे सिस्टर)
उचाइ: १.1.90 ० मिटर वा feet फिट inches इन्च
खेल्ने स्थिति: केन्द्र-फिर्ता